Madaxweynaha Turkiga oo diiday inuu la kulmo Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynaha Turkiga oo diiday inuu la kulmo Farmaajo
Maxamed Cabudullaahi Farmaajo, ayaa waji-gabax kala kulmay dalab uu u diray Madaxweynaha Turkiga, kaas oo iska fogeeyay in Farmaajo la qaato kulan doceed, kadib marka uu dhamaado, shir la filayo inuu todobaadkaan ka dhaco Antalya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha muddada xil-heyntu ka dhamaatay ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, aya la filayaa inu todobaadkaan u socdaalo waddanka turkiga, halkaas uu kaga qeyb galayo, shirka Diblomaasiyada adduunka oo ka dhacaya magaalo xeebeedka dalxiiska ku wanaagsan ee Antalya, 18-ka ilaa 20-ka bishaan.
Inkastoo aysan imaan doonin muraqya weynta reer galbeedka, hadana Madasha Antalya, waxaa looga hadlo doonaa fursadaha jira ee diblumaasiyadeed, dhibaatooyinka cunsuriyadda sii kordheysa, ajnabi naceybka iyo argagixisada khatarta ku ah guud ahaan aadanaha.
Keydmedia Online, ayaa ogaatay in Madaxtooyada Soomaaliya ay gudbisay dalab ku aaddan in shirka kadib uu Farmaajo kulan doceed la qaato Madaxweynaha Turkiga, hayeeshee, uu kulankaas diiday Recep Tayyip Erdogan, sababo la xariira waqtigiisa Farmaajo oo dhamaaday.
Dhanka kale, waxaa la filayaa in Farmaajo, la kulmo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, oo qudhiisu qeyb ka ah madaxda ka qeyb gali doonta Madasha, waxaana kulankaas gadaal ka riixaya Amiirka Dalka Qatar, oo hore u diiday inuu waddankiisu ka qeyb galo, shirka uu qaban qaabiyay Erdogan.